Ranesa Firiana: “Mila hafainganina ny fifidianana kaominaly haverina” - ewa.mg
Ranesa Firiana: “Mila hafainganina ny fifidianana kaominaly haverina”
News - Ranesa Firiana: “Mila hafainganina ny fifidianana kaominaly haverina”
resabe hatramin’izao ny momba ny hiatrehana ny fifidianana
loholona. Anisan’ny anton’izany ny tsy nahavitan’ny fifidianana
ben’ny Tanàna tamin’ny kaominina sasany.
“Mba hamerenana ny
fahatokisan’ny vahoaka ny mpitondra sy ny zon’ny vahoaka amin’ireo
kaomianina hifidy ny solontenany, tokony hatao araka izay haingana
ny fifidianana” hoy ny mpahay lalàna, Ranesa Firiana.
Misy ny didim-pitsarana mampamerina
ny fifidianana ben’ny Tanàna amin’ny kaominina maromaro. Raha ny
tokony ho izy, 120 andro aorian’ny nivoahan’ny didim-pitsarana no
atao izay fifidianana izay. Nefa misy koa ny fampiakarana fitsarana
fandravana nataon’ny kandidà hafa, izay mety hisy fiantraikany
amin’izay famerenana fifidianana izay.
Tokony hisy fifanatonan’ny
Tokony hisy fiaraha-miasa sy
fandaminana manokana hataon’ireo tomponandraikitry ny fifidianana
amin’ny fanomanana izany. Eo ny Ceni, ny avy amin’ny
Filankevi-panjakana izay mitsara ny fangatahana fandravana rehetra,
na ireo fitsarana misahana ny ady ifanaovana amin’ny fanjakana raha
tsy misy fampiakarana ilay didim-pitsarana sy fanapahan-kevitra
mampamerina ny fifidianana amina kaominina iray.
Rehefa vita ny fifanatonan’ireo
tomponandraikitra, tokony hofaritana ny daty hamerenana ny
fifidianana. Fifidianana manokana no hifidianana azy ireo ka manohy
ny fotoam-piasana miaraka amin’ireo ben’ny Tanàna sy ny
mpanolotsain’ny Tanàna efa am-perinasa izay voafidy eo.
Miara-mifarana amin’ireo voafidy tamin’ny fifidianana kaominaly
farany teo ny fe-potoam-piasan’izy ireo.
L’article Ranesa Firiana: “Mila hafainganina ny fifidianana kaominaly haverina” a été récupéré chez Newsmada.
Fiahiana ny zon’ny gadra
Namoaka fanambaràna mitaky ny hampiharana avy hatrany ny fanamarihana sy ny toromarika nataon’ny Praiminisitra Ntsay Christian amin’ny tokony hirosoana amin’ny fanajana ny zon’ireo voafonja ny fikambanana iraisam-pirenena « Amnesty international ». Takian’ity farany ny fanavaozana ny fonja ary ny famoahana an’ireo voafonja mbola tsy voatsara. L’article Fiahiana ny zon’ny gadra est apparu en premier sur AoRaha.
Covid-19: Situation du 30.07.2020
Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « Covid-19: Situation du 30.07.2020 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.344 guérisons et 431nouveaux cas de Covid-19 sont rapportés par le Pr Vololontiana ce 30 juillet 2020. 388 de ces nouveaux cas sont localisés dans la région d’Analamanga, 13 cas dans la région d’Alaotra mangoro, 2 cas dans la région d’Itasy, 6 cas dans la Région Boeny, 1 cas dans la région Sava, 2 cas dans le région Antsinanana, 7 cas dans la region de Haute Matsiatra, 3 cas dans la région d’Amoron’i mania. Selon le rapport du Professeur, 7461 personnes sont totalement guéries du Covid-19 tandis que 3182 patients sont en cours de traitement dont 94 presentent des formes graves. 6 nouveaux décès dus au coronavirus ont été egalement enregistrés dans le bilan epidemiologique du CCO ce jour. Ce qui porte à 105 le nombre de personnes ayant perdu la vie à cause de cette maladie.L’article Covid-19: Situation du 30.07.2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
FIKAMBANAN-JIOLAHY :: Telo mianadahy voarohirohy tamin’ ny fanafihana niharo vono olona
Vosambotra ny vehivavy iray sy lehilahy roa voarohirohy tamin’ny fanafihana mitam-basy niranga teny Ankadievo Alasora, tamin’ ny talata 8 novambra lasa teo. Fandrobana niharo vono olona no niseho tamin’io fotoana io, izay nahafatesana ny iray tamin’ ireo olona roa voavely vy. Mitohy ny fikarohana ny naman’ireo olon-dratsy. Efa naiditra am-ponja vonjimaika kosa izy telo mianadahy. Voatondro ho anisan’ireo efa-dahy nandray anjara mivantana tamin’ny fanafihana izy roa lahy. Voarohirohy ho niray tsikombakomba tamin’izy ireo kosa ilay vehivavy. Entana maro toy ny finday sy firavaka ary vola maherin’ ny valo tapitrisa ariary no very, nandritra ny fanafihana nataon’ny jiolahy efatra nitondra basy, tamin’ny harivan’ ny talata 8 novambra, teny Ankadievo Alasora. Novelesin’ireo mpanafika tamin’ny vy ny mpandraharaha roa lasibatra. Namoy ny ainy teny amin’ny hôpitaly, herinandro taorian’izay, ny iray tamin’izy ireo. Niainga tamin’ny fahatrarana ny lehilahy iray tamin’izy telo ireo no nisamboran’ny mpitandro filaminana ny roa ambiny, rehefa nofandrihina. L’article FIKAMBANAN-JIOLAHY :: Telo mianadahy voarohirohy tamin’ ny fanafihana niharo vono olona est apparu en premier sur AoRaha.
Fahafatesana nateraky ny fanarahan-dia :: Mpirahalahy efatra novonoin’ny dahalo
Namoy ny ainy noho ny hetra-ketraky ny dahalo, tany amin’ny kaominina Androy, distrikan’i Lalangina, ny lehilahy efatra mpirahalahy, ny alin’ny sabotsy lasa teo. Maty tsy tra-drano ny telo tamin’izy ireo. Nindaosin’ny fahafatesana teny amin’ny hopitaliben’i Fianarantsoa kosa ny iray. Teny am-panarahan-dia an’ity andian’olon-dratsy izy efa-dahy ireo no niharam-boina. Nitohy ny fanenjehana. Lavon’ny mpitandro filaminana ny roa tamin’ireo malaso.Fantatra fa nanao latsak’ alina tao amin’ny tanàna iray ny dahalo manodidina ny enimpolo lahy, tamin’io sabotsy io. Nangalarin’izy ireo ny omby enina ambin’ ny folo, teo an-tanàna. Nanao ny fanarahan-dia ny fokonolona. Anisan’izany ny lehilahy efatra mpirahalahy. An’ny ray aman-drenin’izy ireo ny enina tamin’ireo omby voaroba. «Lalana tokana no fidirana sy fivoahana ao amin’io tanàna voatafika io. Niaraka tamina lehilahy iray hafa izy efa-dahy nanenjika. Voafandriky ny dahalo anefa izy ireo. Samy voatifitra ireo mpirahalahy sady mbola voatapa-doha koa ny iray. Afaka nandositra ny naman’ izy ireo. Novonoin’ireo dahalo teo amin’io toerana io ihany koa ny omby iray», araka ny fanampim-panazavana avy amin’ny mpitandro filaminana, any an-toerana. Telopolo minitra taorian’ ny fanafihana no naheno ny zandary any Lalangina. « Voatifitra teo amin’ny tratrany tandrify ny fony ny iray tamin’izy efa-dahy. Izany no nitarika tamin’ny fahafatesany teny amin’ny hopitaly. Nisy fifandonana nahery vaika teo aminay sy ny dahalo. Tafaverina ny omby sivy, taorian’ny fahalavoan’ny roa tamin’izy ireo», hoy hatrany ny zandary any an-toerana. Tsy maintsy hisy ny fanadihadiana hatao eo an-tanàna manoloana an’ity raharaha ity, aorian’ny fandevenana an’izy efatra mirahalahy. L’article Fahafatesana nateraky ny fanarahan-dia :: Mpirahalahy efatra novonoin’ny dahalo est apparu en premier sur AoRaha.
Fotoam-pivavahana: samy manana ny fandaharam-potoany ny isam-piangonana
Samy manana ny fandaminany ny fotoana handrindrana ny fotoam-bavaka sy ny fidirana ny isam-piangonana, taorian’ny fanambarana nataon’ny filohan’ny FJKM ny amin’ny fisokafan’ny fiangonana.Ho an’ny FJKM Salema vaovao etsy 67ha, ohatra, efa nivoaka ny peta-drindrina mampahafantatra ny mpiangona ny fotoana. Fantatra tamin’izany fa hisokatra isan’andro, manomboka ny alatsinainy hatramin’ny alahady ny tempoly. Hiditra indroa ny fiangonana, ny alatsinainy hatramin’ny zoma.Rakitra indray mandeha ihany Manomboka amin’ny 6 ora sy fahefany maraina ny fidirana voalohany ary miditra amin’ny 8 ora maraina ny fidirana faharoa. Rakitra indray mandeha ihany no hataon’ireo kristianina amin’izany.Mitovy amin’ny fotoam-bavaka isaky ny alahady kosa no hatao ny asabotsy. Misy fidirana intelo. Ny alahady kosa hisy fidirana inefatra. Haharitra 45mn ny fanompoam-pivavahana isan’andiany. Mikasika ny rakitra asabotsy sy alahady dia toy ny fanao efa nitaizana ny kristianina hatrizay ihany no hatao.Hentitra ny fampanarahana fepetra ireo mpiangona amin’ny fitondrana arovava, elanelana 1m, fanasana tanana mialohan’ny fidirana sy rehefa mirava. Tsy hihoatra ny 50 ny mpiangona isan’andiany.Hikatona noho ny fotoam-pivavahan’ny FFKMNa eo aza izany, misy ireo fiangonana nanapa-kevitra ny mbola tsy hisokatra. Anisan’ireny ny etsy amin’ny FJKM katedraly Analakely. Maherin’ny arivo ny kristianina ao an-toerana. Raha hatao indimy miditra aza ny fiangonana, tsy ho voaray avokoa ireo mpiangona rehetra rehefa alahady. Na izany aza, hisy ny maraim-baovao, isaky ny amin’ny 6 ora maraina. Tahaka izany koa ny FJKM Isotry Fitiavana. Mbola handray ny fotoam-pivavahana iarahana amin’ny FFKM ny alahady izao. Aorian’izany no ahafantarana ny ho tohiny.Tatiana A L’article Fotoam-pivavahana: samy manana ny fandaharam-potoany ny isam-piangonana a été récupéré chez Newsmada.
Niampy roa indray ireo lavon’ny covid-19, tao anatin’ny 24 ora. Avy eto Analamanga sy avy any amin’ny faritra Diana ireo namoy ny ainy ireo. Tafakatra 225 izany izao ireo matin’ity valanaretina ity hatramin’ny 19 marsa noho mankaty.Etsy andaniny, miisa 12 ireo tranga vaovao ho an’ny eto Analamanga amin’ireo 20 nifindran’ny valanaretina. Avy any Vakinankaratra kosa ny efatra raha iray avy ny avy any Itasy, Alaotra Mangoro, Matsiatra Ambony ary avy any amin’ny faritra Boeny.Nihena enina ireo anaty fahasarotana ka miisa 20 izany izao ireo “forme grave”.Na izany aza, miisa 36 ireo sitrana ka anisan’ny maro amin’izany ny avy any Diana, miisa 15. Tafakatra 14 682 izany izao ireo nahafeno ny fepetra ho amin’ny fahasitranana amin’ireo mitondra ny tsimokaretina, miisa 16 073. Miisa 1 164 ireo mbola manaraka fitsaboana.Synèse R.L’article Mitombo hatrany ny isan’ireo lavon’ny covid-19 a été récupéré chez Newsmada.